Rag Hubeysan Oo Labo Qof Ku Dilay Baled Xaawo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Rag Hubeysan Oo Labo Qof Ku Dilay Baled Xaawo
Baled-xaawo – Mareeg.com: Taliska saldhigga degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo ayaa ka hadlay dil xalay fiidkii degmada loogu gaystay laba nin oo dhallinyaro ahaa oo ka tirsanaa dadka deegaanka.
Taliyaha saldhigga degmada Beled Xaawo, Maxamuud Fara-Dheere, ayaa sheegay in dilka ay gaysteen labo nin oo ku hubaysnaa AK-47. Lama oga cidda ay ahaayeen kooxda dilka geysatay.
Labada qof oo ee la toogtay ayaa la sheegay in mid ka mid ah uu horay uga baxsaday Al-shabaab uuna ka mid ahaa ciidamada nabadsugidda dowladda Soomaaliya, halka qof kalena la sheegay inuu ahaa rayid.
Guddoomiyaha gobolka Gedo, Maxamed Cabdi Kaliil oo la hadlay warbaahinta ayaa xusay in dilka labadan ruux ay geysteen kooxo ka tirsan ururka Al-shabaab, ayna hadda wadaan baaritaanno lagu soo qabanayo.
“Hadda war xaqiiqo ah lagama hayo sida uu dilka u dhacay iyo sababta ka dambeysay, balse waxaan wararka ku haynaa inay dileen kooxo ka tirsan Al-shabaab ayna baxsadeen, waxaana socda baaritaanno lagu raadinayo,” ayuu yiri guddoomiyaha gobolka Gedo.
Kaliil wuxuu sheegay in labada qof ee la dilay uu midkood kasoo goostay Al-shabaab uuna ku biiray ciidamada dowladda xilli uu Muqdisho ku sugnaa, uuna dib ugu soo laabta gobolka, qof kalena uu ahaa rayid.
Degmada Balad-xaawo oo ku dhow soohdinta ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxay ka mid tahay degmooyinka ay gobolka Gedo ee ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda Soomaaliya.